Tokyo Win – Tokyo Win
A1,A2 Class	အသေးစိတ် သင်တန်းကြေး : 300,000	ကျပ် အချိန် : 10:00AM	- 3:00PM	သင်တန်းရက် : SAT,SUN	ကာလ : 6	လ စတင်မည့်ရက် : 24. Aug. 2019	နေရာ : Center 2
Conversation Course	အသေးစိတ် သင်တန်းကြေး : 60,000	ကျပ် အချိန် : 10:00AM	- 12:00PM	သင်တန်းရက် : MON,TUE,THUR,FRI	ကာလ : 1	လ စတင်မည့်ရက် : 12. Aug. 2019	နေရာ : Center 2
N5 Class	အသေးစိတ် သင်တန်းကြေး : 120,000	ကျပ် အချိန် : 6:00PM	- 8:00PM	သင်တန်းရက် : MON,TUE,THUR,FRI	ကာလ : 3	လ စတင်မည့်ရက် : 23. Sep. 2019	နေရာ : Center 1
2019 OCT ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းတက်ရန် ထွ...	အသေးစိတ်	 🔵TOKYOWIn Japanese Education Center ✅ဂျပန်နိုင်ငံ OSAKA နှင့် KOBE မြို့များသို့ 2019 OCT ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းတက်ရန် 30/09/2019 ညမှ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှထွက်ခွာကြပြီး 01/10/2019 မနက်တွင်…
ဧရာဝတီတိုင်း၊ဝါးခယ်မမြို့နယ် ၊ဟင်္သထုံးကျေ...	အသေးစိတ်	 25.092019 ( WED ) ဧရာဝတီတိုင်း၊ဝါးခယ်မမြို့နယ် ၊ဟင်္သထုံးကျေးရွာ၊အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းခွဲ သို့ လိုအပ်သောလျပ်စစ်မီးရရှိနိုင်ရန် ဒီဇယ်အသုံးပြု Watt 10000 (10KWatt) ထွက်သော မီးစက်အား 25/09/2019 နေ့တွင် ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်အား ရိုသေစွာလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ရပ်ရွာ…
TOKYOWIN ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်း...	အသေးစိတ်	 🙏🙏🙏TOKYOWIN ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ဆရာဆရာမများ မိတ်ဆွေများ၏ အလှူ ၊ 🙏🙏🙏 မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ် ရှိ ဘုရားကျောင်းကုန်းကျေးရွာ နှင့် အခြားရေ ဘေးသင့် ပြည်သူများသို့ ပြန်လည်ထူးထောင်ရေးနှင့် ကယ်ဆက်ရေး…
ကျွန်တော်၏အမည်မှာ ဦးသိန်းဝင်း ဖြစ်ပါသည်။ TOKYOWIN Co.,Ltd ကို 2015 JULY 25 ရက်နေ့မှ စတင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်ဘာသာ ရပ်ကို အထေူးအလေးပေး သင်ကြားလျက်ရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ကျောင်းတက်နိုင်ရန် ကြိုးစားကြသော လူငယ်များ အတွက် အနာဂါတ်ကို မှန်ကန်တိကျစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဂျပန်ဘာသာရပ်ကို အဆင့်မြင့် သည်အထိသင်ကြားပေးပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီများနှင့်ချိတ်ဆက်ကာသင့်တော်ရာအလုပ်များကိုလည်းမိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ရှိနေပါသည်။ ထို့အပြင် 2019 နှစ်ဦးပိုင်းမှစ၍ Australia နိင်ငံရှိ နံမည်ကြီးတက္ကသိုလ် ကောလိပ်များသို့ ပညာသင်နိုင်ရန် လည်း တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
အမှတ်(၁၉၇)၊ B/3, 33လမ်း(အထက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
09 - 260 660 551 / 09 - 260 660 552
အမှတ်(၂၄၄/၂၄၆)၊ အခန်း(၄၀၅)၊ ၅လွှာ၊ ပင်လုံထိပ်ထားကွန်ဒို(B)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
09 - 400 999 551 / 09 - 400 999 552
Developed by NEW WORTH WEB DEVELOPMENT